Youtube: Gini bu uzo vidiyo gi n’ebe ahu? | Martech Zone
Anyị na-elekwasị anya na ọdịiche mgbe ọ bịara na atụmatụ ahịa ahịa dijitalụ nke ndị ahịa anyị. Nchọgharị ọchụchọ abụghị naanị ọwa maka azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa ịchọta ụdị ha na-achọ, algorithms bụkwa akara ngosi pụtara ìhè nke ikike ika na ntanetị. Ka anyị na-enyocha ọdịnaya nke na-adọrọ uche gaa na ika ahụ, anyị na-atụle ọdịnaya dị na saịtị ọ bụla nke ndị asọmpi iji hụ ihe dị iche.
Ọtụtụ mgbe, otu n'ime ndịiche a bụ video. E nwere ọtụtụ ụdị vidiyo enwere ike ịmepụta, mana onye na-akọwa vidiyo, esi vidiyo, na akaebe nke ndị ahịa kachasị emetụta ụlọ ọrụ. Esi-na-eme vidiyo vidiyo na # Youtube na-anata nkezi nke echiche 8,332, otu ndị kachasị ewu ewu na-esote vidiyo vidio.
Ọ bụrụ na oge eruola ịsọ mpi na ọdịnaya vidiyo, m ga-akwado ụlọ ọrụ gị ka ha tinye atụmatụ ziri ezi:
Debe nnukwu ego maka nkọwa video nke ahụ ruru 2 nkeji. Cheta na vidio a ga-arapara n'ahụ gị obere oge, yabụ ịme ka mbọn na-agbanwe agbanwe, iwepu ihe ọ bụla akọwapụtara n'oge ọ bụla, na ịkwa njakịrị n'ọdịnihu ga-abụ nnukwu atụmatụ. Vidio eserese nke na-eme nke ọma nwere ike ịbụ $ 5k na $ 10k - mana nnukwu nloghachi na itinye ego.
Were ohere ọ bụla i nwere ike see vidiyo nke akaebe. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ pụtara na ị na-ewe ndị ọrụ ihe nkiri were zigara ndị ahịa gị, ị kwesịrị itinye ego na ya. Akaebe bụ ndị na-egosi ntụkwasị obi na enweghị ike iti ihe. Enwekwara ike weghachite ha maka ederede edere na dijitalụ dijitalụ gị na mbipụta gị. Elegharala ikike nke mmetụta mmetụta uche na ụlọ ọrụ gị.
Na-arụ ọrụ chere echiche ndu ndu nke ahụ gosipụtara ọrụ mmadụ na ọdịbendị nke ụlọ ọrụ gị nke mere ka ị dị iche na ndị asọmpi. Maka arụmọrụ, anyị na-ejikarị ụbọchị niile ma ọ bụ abụọ agbapụ ndị isi azụmaahịa ahụ. Site na nke a, anyị nwere ike ịmepụta vidiyo ọkụ nke na-elekwasị anya na otu onye n'otu oge, ma ọ bụ na anyị nwere ike ịgwakọta ma kwekọọ na vidiyo vidio na isiokwu dị iche iche.
Echefula na vidiyo abụghị naanị ezigbo akụ maka saịtị gị, Youtube n'onwe ya na-aga n'ihu na-eduga n'ịntanetị na-esote Google. Na-ebuli Youtube gị elu ọwa na nke ọ bụla n'ime vidiyo gị maka mmetụta kachasị. Mepụta vidiyo ndị ọzọ oge niile iji wuo ndị debanyere aha ma bido obodo nke gị.
Kedu ihe dị n'akụkụ? Vidio dị ndụ. Youtube na-awụli elu isi n'ime ndụ gụgharia egwuregwu. Anyị ka bụ ụtụtụ, mana oge ụfọdụ nke ahụ bụ oge kachasị mma iji waba na teknụzụ na-apụta. Tupu nnukwu ụdị emee ego ahụ, azụmaahịa ndị pere mpe nwere ike irite uru ma chụpụ oke ahịa ahịa. Ọ bụ ịgba chaa chaa n'ezie - mana anyị ahụla ya ka ọ na-akwụ ụgwọ ugboro ugboro.
Ihe omuma a site na Anya Studio Studio ga-enye gị nyocha nke otu ọwa a dị oke egwu mgbe ọ na-arụ ọrụ na vidiyo.
Tags: vidiyo nke ndị ahịankọwa videoesi-videobụ youtube ziri ezi maka ndị na-ege gị ntịebi ndụvidiyo nke akaebechere echiche ndu nduụdị vidiyoọnụ ọgụgụ vidiyoyyoutubendụ youtube
Jul 17, 2017 na 7: 53 AM
Ahụrụ m YouTube n'anya. M na-ejigharị ọdịnaya Facebook Live ozugbo na saịtị ahụ. M nwere ike mgbe ahụ embed videos kpọmkwem site n'ebe ahụ ka m na saịtị.
YouTube Live bụ ụzọ dị mma iji wuo obodo ngwa ngwa, ma n'adịghị ka Facebook, ebe ndị mmadụ nọ, maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche, amaara m n'ezie na ndị mmadụ nọ na YouTube maka otu nzube. ile vidio. Enwere ndị na-ege ntị raara onwe ha nye, yana na nkata ndụ, ọ na-eme ka ahụmịhe ahụ bụrụkwuo nke onwe. Ahụla m oge awa ndụ 6 nke na-eju anya nke na-arụpụta ihe.